Mhando dzakasiyana dzeEV kuchaja maConnectors
Kune zvikonzero zvakawanda zvekufunga kuchinjira kune imwe inofambiswa nemagetsi kubva kumota ine peturu.Magetsi emagetsi akadzikama, ane yakaderera mashandiro emari uye anoburitsa mashoma kwazvo emisi emhepo zvakanaka kune vhiri. Haasi ese emagetsi mota uye plug-ins zvakagadzirwa zvakaenzana, zvakadaro. Iyo EV yekuchaja chinongedzo kana yakajairwa mhando ipulagi kunyanya inosiyana pamadunhu egeographies uye mamodheru.
Ndinoziva sei kuti ndeipi plug-in yangu yemagetsi mota iri kushandisa?
Nepo kudzidza kuchiratidzika kunge kwakawanda, zviri nyore chaizvo. Mota dzese dzemagetsi dzinoshandisa chinongedzo chinova ndicho chiyero mumisika yavo dzakanangana neyakajairwa 1 uye nhanho 2 yekuchaja, North America, Europe, China, Japan, nezvimwewo Tesla ndiyo yega yakasara, asi mota dzayo dzese dzinouya netambo yeadapter simba musika mureza. Tesla Level 1 kana 2 zviteshi zvekuchaja zvinogona zvakare kushandiswa neisiri-Tesla mota dzemagetsi, asi ivo vanofanirwa kushandisa adapta iyo inogona kutengwa kubva kune wechitatu bato mutengesi. Kune DC yekuchaja nekukurumidza, Tesla ine yepamhepo netiweki yezviteshi zveSupercharger zvinongogona kushandiswa nemotokari dzeTesla, hapana adapta inoshanda pazviteshi izvi nekuti pane maitiro echokwadi. Nissan neMitsubishi mota dzinoshandisa yeJapan standard CHAdeMO, uye ingangoita yega yega mota yemagetsi inoshandisa iyo CCS yekuchaja mwero.
Maitiro Ekuchamhembe kweAmerica Type 1 EV Plug
Tora 1 EV Socket
Maitiro eEuropean IEC62196-2 Type 2 EV Connectors
Tora 2 Inlet Socket
Tora 2 zvinongedzo zvinowanzodaidzwa kunzi 'Mennekes' zvinongedzo, mushure memugadziri weGerman uyo akagadzira dhizaini. Ivo vane 7-pini plug. Iyo EU inokurudzira Rudzi rwechipiri zvinongedzo uye ivo dzimwe nguva vanodomwa neiyo yepamutemo standard IEC 62196-2.
EV kuchaja marudzi ekubatanidza muEurope akafanana neaya ari kuNorth America, asi kune akatiwandei mutsauko. Kutanga, iyo yemagetsi imba yemagetsi ndeye 230 volts, ingangoita zvakapetwa kakapetwa neyakashandiswa neNorth America. Iko hakuna "level 1" inobhadharisa muEurope, nekuda kwechikonzero ichocho. Chechipiri, panzvimbo yeJ1772 yekubatanidza, iyo IEC 62196 Rudzi rwechipiri yekubatanidza, inowanzo kunzi mamenekes, ndiyo muyero unoshandiswa nevose vagadziri kunze kweTesla muEurope.
Zvakangodaro, Tesla nguva pfupi yadarika akachinja iyo Model 3 kubva kune yayo inobatanidza chinongedzo kuenda kune Type 2 chinongedzo. Tesla Model S uye Model X mota dzinotengeswa muEurope dzichiri kushandisa iyo Tesla chinongedzo, asi fungidziro ndeyekuti ivowo vanozopedzisira vochinjira kuEuropean Type 2 chinongedzo.
CCS Combo 1 Chidimbu
CCS combo 1 Inlet Chigadziko
CCS Combo 2 Chidimbu
CCS combo 2 Inlet Chigadziko
CCS inomirira Yakasanganiswa Yekuchaja Sisitimu.
Yakabatanidzwa Yekuchaja Sisitimu (CCS) inovhara Combo 1 (CCS1) uye Combo 2 (CCS2) ndiro.
Kubva kunopera kwe2010s, chizvarwa chinotevera chejaja chakabatanidza Type1 / Type 2 charger ine gobvu DC yazvino chinobatanidza kugadzira iyo CCS 1 (North America) uye CCS 2.
Iyi yekubatanidza chinongedzo zvinoreva kuti mota inochinjika nekuti inogona kutora AC kubhadharisa kuburikidza nechinobatanidza muhafu yepamusoro kana DC kuchaja kuburikidza neaviri akasanganiswa yekubatanidza zvikamu.Semuenzaniso, Kana iwe uine CCS Combo 2 socket mumotokari yako uye uchida kuchaja kumba pa AC, iwe unongovhara yako yakajairika Type 2 plug muhafu yepamusoro. Iyo yepazasi DC chikamu chekubatanidza chinoramba chisina chinhu.
MuEurope, DC inokurumidza kuchaja yakafanana neNorth America, uko CCS ndiyo inoshandiswa inoshandiswa nevose vanogadzira kunze kweNissan, Mitsubishi. Iyo CCS system muEurope inosanganisa iyo Type 2 chinongedzo ne tow dc yekukurumidza kubhadharisa pini senge iyo J1772 chinongedzo muNorth America, saka kunyange ichiri kunziwo CCS, iri yakati siyanei chakabatana. Model Tesla 3 ikozvino inoshandisa European CCS chinongedzo.
Japan Yakajairwa CHAdeMO Chinobatanidza & CHAdeMO Inlet Socket
CHAdeMO: Iyo yeJapan yekushandisa TEPCO yakagadzira CHAdeMo. Ndiyo yepamutemo yeJapan standard uye angangoita ese maJapan DC anokurumidza majaja anoshandisa CHAdeMO chinongedzo. Izvo zvakasiyana kuNorth America uko Nissan neMitsubishi vari ivo chete vagadziri izvo parizvino vanotengesa mota dzemagetsi dzinoshandisa iyo CHAdeMO yekubatanidza. Idzo chete dzemagetsi mota dzinoshandisa mhando ye CHAdeMO EV kuchaja chinongedzo ndeye Nissan LEAF uye Mitsubishi Outlander PHEV. Kia siya CHAdeMO muna 2018 uye ikozvino inopa CCS. CHAdeMO zvinongedzo hazvigovane chikamu chemubatanidzi neJ1772 inlet, zvinopesana neCCS system, saka inoda imwe yekuwedzera ChadeMO inopinza pamotokari Izvi zvinoda chiteshi chikuru chekuchaja
Tesla Supercharger EV Chidimbu & Tesla EV Socket
Tesla: Tesla anoshandisa imwecheteyo Chikamu 1, Chikamu 2 uye DC nekukurumidza kuchaja zvinobatanidza. Iyo inobata Tesla chinongedzo chinogamuchira ese magetsi, saka seizvo zvimwe zviyero zvinoda, hapana chikonzero chekuve nechimwe chinongedzo chakanangana neDC inokurumidza kubhadharisa. Mota dzeTesla chete ndidzo dzinogona kushandisa yavo DC inokurumidza charger, inonzi Supercharger. Tesla yakaiswa uye inochengetedza zviteshi izvi, uye ndezvekushandisa chete kwevatengi veTesla. Kunyangwe iine adapta tambo, hazvingakwanise kubhadharisa isiri-tesla EV pachiteshi cheTesla Supercharger. Imhaka yekuti pane nzira yekusimbisa inoratidza mota seTesla isati yapa mukana wekuwana simba. Kubhadharisa iyo Tesla Model S parwendo rwemumugwagwa kuburikidza neSupercharger kunogona kuwedzera zvakaringana kunge mamaira 170 renji mumaminetsi makumi matatu chete. Asi iyo V3 vhezheni yeTesla Supercharger inokwidza simba rinobuda kubva kuma120 kilowatts kuenda ku200 kW. Iwo maSupercharger matsva uye akavandudzwa, ayo akatanga mu2019 uye achiramba achibuda, anomhanyisa zvinhu kumusoro ne25 muzana. Ehezve, kuwanda uye kuchaja zvinoenderana nezvinhu zvakawanda - kubva pakukwira bhatiri remota kusvika pakumhanya uchachaja chechaji, uye nezvimwe - saka "mileage yako inogona kusiyana."
China GB / T EV Kutengesa Chinongedzo
China GB / T DC Chinongedzo
China DC GB / T Inlet Chigadziko
China ndiyo musika mukuru - kure - kwemotokari dzemagetsi.
Ivo vakagadzira yavo yega kuchaja system, zviri pamutemo kunzi neyavo Guobiao zviyero se: GB / T 20234.2 uye GB / T 20234.3.
GB / T 20234.2 inovhara AC kuchaja (imwechete-chikamu chete). Iwo plugs nezvigadziko zvinotaridzika senge Rudzi rwechipiri, asi pini uye zvinogamuchirwa zvinodzoserwa.
GB / T 20234.3 inotsanangura mashandiro anoita DC nekukurumidza. Kune imwe chete munyika yose DC kuchaja system muChina, pane kukwikwidza masystem senge CHAdeMO, CCS, Tesla-yakagadziridzwa, nezvimwe, inowanikwa mune dzimwe nyika.
Sezvineiwo, maJapan-based CHAdeMO Association neChina Electricity Council (iyo inodzora GB / T) vari kushanda pamwechete pane nyowani DC inokurumidza system inozivikanwa seChaoJi. Muna Kubvumbi 2020, ivo vakazivisa maprotocol ekupedzisira anonzi CHAdeMO 3.0. Izvi zvinobvumidza kubhadharisa pamusoro pe500 kW (600 amps muganho) uye zvakare ichapa iyo bidirectional kuchaja.Tichifunga nezveChina ndiye mutengi mukuru weEVs, uye kuti nyika zhinji dzematunhu dzinogona kujoinha kusanganisira India, iyo CHAdeMO 3.0 / ChaoJi danho rinogona kudzora CCS nekufamba kwenguva sesimba rinotungamira mukuchaja.